मिडिया एनपी एनपी – Page 113 – Medianp
सेक्स अफर नामान्दा फिल्म गुमाउनु पर्यो : माल्लिका सेरावत
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार ३१, २०७५११:१५0
एजेन्सी,३१ असार । डेब्यु फिल्मबाटैैै हिट सिन दिएकी अभिनेत्री माल्लिका सेरावत सेक्स अफर नस्वीकारर्दा निकै फिल्म गुमाएको बताएकी छन् । लामो समयदेखि उनले कुनै फिल्म पाएकी छैनन् । फिल्म ‘मर्डर’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी माल्लिकाले पहिलो फिल्ममानै
३ फिटका बालक जस्ले पोर्न उद्योगमा मच्चाए बबाल
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार ३१, २०७५१०:५५0
एजेन्सी,३१ असार । तस्वीरमा अवोध जस्तो देखिने २४ वर्षिय युवक जो पेशाले पोर्न स्टार हुन् । यतिबेल पोर्नस्टार इन्डस्ट्रीमा निकै चर्चित रहेका छन् । जसलाई देख्ने बित्तिकै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनी विश्वकै एक चर्चित
रजनिकान्तको फिल्म २.० नोभेम्बर २१ मा रिलिज हुँदै
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार ३१, २०७५१०:३८0
एजेन्सी,३१ असार । बलिउड अभिनेत्री एमी ज्याक्सन र रजनिकान्तले फिल्म २.० को मूख्य भूमिकामा रोमान्स गरेका छन् । पछिल्लो समय इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरेको हट तस्विरको कारण उनी सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै भाइरल भएकी छन् । एमीको
बलिउड सुपरस्टारहरुको सम्बन्ध समलिंगीसँग
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५१७:५६0
एजेन्सी,२९ असार । बलिउडका अधिकांश सुपरस्टारहरुको सम्बन्ध समलिङगीहरुसँग रहेको पाइएको छ । बलिउडका थुप्रै स्टारहरु समलिङगीहरुको बारेमा खुलेर बोल्ने गर्छन् । यस्तै खुलेर उनीहरुको सर्मथन गर्ने एक अभिनेत्रीमा माहिका शर्मा पनि रहेकी छन् । उनी तेस्रो
सलमान खान ल्याउँछु भनेर ठगी गर्ने ओडिसीका सिमान्त गुरुङ पक्राउ
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५१७:१२0
काठमाडौँ,२९ असार । भारतीय अभिनेता सलमान खानसहित अन्य कलाकारहरुलाई नेपाल ल्याएर कन्सर्ट आयोजना गर्ने भनि टिकट विक्री गरि ठगेको अभियोगमा ओडिसी इन्टरटेन्मेन्टका प्रमुख सिमान्त गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले गुरुङलाई
यस्तो बजार, जहाँ आफुलाई मन परेको दुलहि किन्न पाइन्छ
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५१६:५६0
एजेन्सी,२९ असार । सामान्यतया हामी बजारमा आफूलाई आवस्यक परेका वस्तुहरु किन्न जान्छौं । तर के तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कुनै बजारमा दुलही पनि बिक्री हुन्छन् ? बुल्गेरियामा यस्तो हुन्छ । यहाँको स्तारा जागोर नामको ठाउँमा हरेक
स्कुल फि नतिरेको भन्दै १६ विद्यार्थी ५ घण्टा थुनामा
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५१६:४२0
एजेन्सी,२९ असार , भारतको दिल्लीमा देल्ली स्कुलले स्कुलको फि नतिरेको भन्दै १६ जना विद्यार्थीलाई ५ घण्टा थुनिदिएको छ । किन्डरगार्डेनमा पढ्ने ४ वर्षदेखि ६ वर्षका १६ जना विद्यार्थीलाई अभिभावकले फि नबुझाएको भन्दै विद्यालयले ५ घण्टा थुनामा
अभिनेत्री मधुबालाको बायोपिक निर्माण हुने
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५१६:१५0
एजेन्सी,२९ असार । यो वर्षलाई बलिउडमा बायोपिक निर्माणको वर्ष भन्दा फरक नपर्ला । फिल्म ‘सञ्जु’ मा अभिनेता सञ्जय दत्तको बायोपिकले चैतर्फी चर्चा बटुलिरहेको कारण होला बायोपिक बनाउनेको भिड नै लागेको छ । यतिबेला फेरि अर्की अभिनेत्री
गोल्डेन बल र बालोन डिओरमा मड्रिक भर्सेस एमबाप्पे कसले मार्ला बाजी ?
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५१५:५३0
काठमाडौँ,२९ असार । विश्वकप खेल्न गएका सबै खेलाडीको चाहना हुन्छ गोल्डेन बल र बालोन डिओर जित्ने । तर यस्तो अवसर सबैमा हुँदैन् । वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी एक जनाले मात्र यस्तो अवसर पाउने गर्छन् । यो वर्षको
शाहिदकी बहिनी सना बलिउडमा डेब्यु गर्दै
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५१५:०९0
एजेन्सी,२९ असार । पछिल्लो समय भाइ बहिनीको करियर निर्माणमा लागेका अभिनेता शाहिद कपुरकी बहिनी सना कपुर बलिउडमा डेब्यु गर्ने भएकी छन् । शाहिदका भाइ इशान खट्टरले फिल्म ‘धडक’ प्रमोशनमा ब्यस्त रहेको छ । सुन्दरी सनाले दाई